भोलिदेखी निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउने तयारी ! कुन काम गर्न पाउने, कुन नपाउने ? हेर्नुहोस – – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/भोलिदेखी निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउने तयारी ! कुन काम गर्न पाउने, कुन नपाउने ? हेर्नुहोस –
२३ भदौ, काठमाडौं । उपत्यका प्रशासनले चौथो पटक निषेधाज्ञा थप्ने वा नथप्ने भन्ने विषयमा छलफल थालेको छ । मंगलबार दिउँसो साढे २ बजे काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुबीच भर्चुअल संवाद हुँदैछ । कोरोना सं’क्रमण बढेपछि तीनवटै जिल्लाले भदौ ४ गतेदेखि नि’षेधाज्ञा लगाएका छन् । तेस्रो पटक थपिएको निषेधाज्ञाको समय बुधबार मध्यराति सकिँदैछ । तर अझै संक्रमण नियन्त्रणमा नआएकाले पूर्ण रुपमा खुला गर्न नहुनेमा तीन वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी एकमत छन् ।